Soo dejisan Ad-Aware Free Antivirus+ 11.7.485.8398 – Vessoft
Soo dejisan Ad-Aware Free Antivirus+
Free adda + Ad-Aware – software ah si ay u ilaaliyaan your computer hanjabaadaha kala duwan. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah ilaalinta ka furin iyo fayrusyada ee noocyada kala duwan, aamin file downloads, updates ee sida diirada ammaanka iwm Ad-Aware Free adda + kuu ogolaanayaa inaad si ay u fuliyaan iskaanka degdeg ah, dhamaystiran ama xushay ee nidaamka iyo meelaha cudurka files ee karantiil. Software waxaa ka mid ah hab gaar ah kaas oo ilaaliya computer halka daawashada filim ama jooga ciyaarta la load yar ku nidaamka. Sidoo kale, Ad-Aware Free adda + saamaxaaya in ay qarka u saaran ammaanka code ah si ay u ilaaliyaan software ka soo horjeedaa weerarada dibadda iyo suurtagalnimada in la beddelo goobaha adigoo isticmaala kale.
Ilaalinta kalsoonaan karo oo ah habka
Hababka kala duwan ee iskaanka
Qaabka ugu yar load on nidaamka
Kartida aad u dhigay amniga code ah
Ad-Aware Free Antivirus+ Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... 360 Total Security 9.0.0.1117
English, Español, Deutsch, 中文... Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19
Antiviruses software waxaa loogu talagalay si loo hubiyo computer cudurka ee walxaha xaasidnimo ah ama khatar ay dhexdhexaadnimada xiga.
Antiviruses software antivirus ayaa si aad u ilaaliso computer ka dhan ah spyware, adware, ransomware, furin iyo walxaha aadka u halista ah.
Phone software The si ay u gudbiyaan faylasha music, video clips ama playlists dhexeeya iPhone, iPod, iPad iyo computer labada dhinacba.